Budget စမတ်ဖုန်း လောကကို တုန်လှုပ်စေခဲ့တယ့် ASUS ZenFone Max Pro (M1) | MyTech Myanmar
Budget စမတ်ဖုန်း လောကကို တုန်လှုပ်စေခဲ့တယ့် ASUS ZenFone Max Pro (M1)
ဒီတော့ ASUS ရဲ့ ZenFone Max Pro (M1) က Budget စမတ်ဖုန်း လောကကို ဘယ်အချက်တွေကြောင့် တုန်လှုပ်စေခဲ့တာလဲ ??? မေးစရာ ရှိလာပါတယ်။ ဒီလိုပါ… ZenFone Max Pro (M1) ဟာဆိုရင် ခါတိုင်းမြင်တွေ့နေကျ ASUS ရဲ့ ZenFone စီးရီးတွေမှာလိုမျိူး ZenUI ကို အသုံးပြုထားခြင်းမရှိဘဲ Pure Android နဲ့ ပွဲထွက်လာခဲ့တဲ့ စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်ဘဲလား…ဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ငွေကျပ် ၂သိန်း ဝန်းကျင်ကို လက်ထဲမှာကိုင်ပြီး Snapdragon 636 SoC နဲ့ ဘက်ထရီ 5000 mAh ပါတဲ့ စမတ်ဖုန်းကို ဈေးကွက်ထဲမှာ သွားရှာမယ်ဆိုရင် ZenFone Max Pro တစ်လုံးတည်းကိုသာ တွေ့ရမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ZenFone Max Pro ဟာ ASUS ရဲ့ အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်း တစ်လုံး ဖြစ်ပြီး Price-to-Performace Ratio နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ရွေးချယ်သင့်တဲ့ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးလို့ ပြောရမှာပါ။ Operating System
ZenFone Max Pro (M1) ရဲ့ Operating System အပိုင်းအတွက် Android 8.1 Oreo ကိုထည့်သွင်းပေးထားတာ ဖြစ်ပြီး ZenUI နဲ့ Customize ပြုလုပ်မထားတဲ့အတွက် Pure Android စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးလို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဒီတော့ ZenUI မကြိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ Android OS ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးချင်တဲ့ သူတွေအတွက် Max Pro က ရွေးချယ်စရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Display အပိုင်းအတွက် 5.99 inches FHD+ Display ကို အသုံးပြုထားပြီး Resolution ကတော့ 1080 x 2160 Pixel ရှိပါတယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင် ငွေကျပ် ၂သိန်း ဝန်းကျင် သုံးရုံနဲ့ FHD+ Display ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ တော်တော် မလွယ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါ့အပြင် Color Production အပိုင်းမှာလည်း Max Pro ရဲ့ Color Accuracy က တော်တော်လေး ကောင်းမွန်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗီဒီယိုဘဲ ကြည့်ကြည့်၊ ဂိမ်းဘဲ ဆော့ဆော့ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ရုပ်ထွက်တွေကို အပြည့်အဝ ခံစားကြည့်ရှု့နိုင်မှာပါ။
Performance အပိုင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင် Max Pro ရဲ့ Processor အပိုင်းအတွက် Mid-Range စမတ်ဖုန်းတွေမှာသာ မြင်တွေ့ရတဲ့ Snapdragon 636 SoC ကိုသုံးထားပါတယ်။ Graphic အပိုင်းအတွက် Adreno 509 GPU လည်းပါဝင်ဦးမှာပါ။ ကျွန်တော် စမ်းသပ်အသုံးပြုနေတဲ့ Max Pro ကတော့ Storage 32GB + RAM 3GB မော်ဒယ်ဖြစ်ပြီး Storage 64GB + RAM 4GB နဲ့ 64GB + RAM 6GB မော်ဒယ်တွေကိုလည်း ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။ နောက်ပြီး Graphic မြင့်မှ ဆော့လို့ကောင်းတဲ့ PUBG လို Game မျိူးကိုတောင် Medium Setting နဲ့ အထစ်အငေါ့မရှိ ဆော့ကစားနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
Game ဆော့လို့ ကောင်းသွားပြီဆိုရင် နောက်မှာကပ်ပြီး ပါလာတဲ့ လိုအပ်ချက်က Battery Life ပါ။ Max Pro မှာ 5000mAh ဘက်ထရီ ပမာဏကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီး 5V/2A 10W အမြန်အားသွင်း စနစ်လည်း ပါဝင်ဦးမှာပါ။ သူရဲ့ Fast Charging က ကျွန်တော်စမ်းကြည့်သလောက်ဆိုရင် ၁နာရီနဲ့ ၁၅မိနစ်ခန့် အားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ဘက်ထရီအား ၄၅% အထိရောက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ၁၀၀% အားအပြည့်သွင်းဖို့ဆိုရင် ၂နာရီနဲ့ ၄၅မိနစ်လောက်ဘဲ လိုအပ်မှာပါ။ ဘက်ထရီအား အရမ်းစားတဲ့ Mobile Legends တို့၊ PUBG တို့လို Game မျိူးတွေကို ၁နာရီလောက် ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဘက်ထရီအားက ၁၅% အထိကုန်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီတော့ ဂိမ်းဆော့လိုက်၊ Facebook သုံးလိုက်၊ ဗီဒီယို ကြည့်လိုက် ဆက်တိုက် လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တောင် တစ်နေ့တာကတော့ ကောင်းကောင်းသုံးလို့ ရမှာပါ။
Security အပိုင်းအတွက် Fingerprint Sensor ပါဝင်သလို Face Unlock စနစ်ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ Fingerprint Sensor က သာမန်ထက် နည်းနည်းလေးပိုကြာသလို ခံစားရပြီး Face Unlock ကတော့ Infrared Sensor မပါတဲ့အတွက် ညဘက်လိုမျိူး အလင်းရောင်နည်းတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကောင်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း သူရဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ ၂သိန်းဝန်းကျင်တန် Budget စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးမှာ Fingerprint နဲ့ Face Unlock အသုံးပြုနိုင်တာကိုဘဲ ကျေးဇူးတင်ရမလို ဖြစ်နေပါပြီ။
ကင်မရာ အပိုင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင် Aperture f/2.2 ရှိတဲ့ 13Megapixels Camera နဲ့ Aperture f/2.4 ရှိတဲ့5Megapixels Camera တွေကို Rear Camera အတွက် တပ်ဆင်ထားပြီး Front Camera အတွက်ကိုတော့ Aperture f/2.2 ရှိတဲ့ 8 Megapixels Camera ကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ Max Pro ရဲ့ ကင်မရာက Auto Focus နဲ့ Portrait Mode တွေမှာ အားနည်းပေမယ့် Normal Shot နဲ့ Low Light photography အပိုင်းမှာတော့ မဆိုးဘူးလို့ ပြောရမှာပါ။ ရုပ်ထွက်တွေက Color Accuracy အပိုင်းမှာ ပြောစရာ မလိုအောင် ကောင်းမွန်နေပြီး Over Saturation ဖြစ်နေတာမျိူး မရှိပါဘူး။ ဗီဒီယိုအပိုင်းမှာလည်း 4K Ultra HD Video တွေကို 30fps နဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ASUS ZenFone Max Pro (M1) ဟာ အလေးချိန်အားဖြင့် 180 Grams လေးပြီးတော့ Triple SIM slot ပါဝင်တဲ့ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ SIM Card ၂ကဒ်အပြင် MicroSD ပါ တစ်ခါတည်းတွဲပြီး သုံးနိုင်မှာပါ။ Max Pro ရဲ့ RAM 3GB/ROM 32GB မော်ဒယ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက်ထဲမှာ လက်ရှိ ရောင်းချနေတဲ့ ဈေးနှုန်းကတော့ ၂၃၉,၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ RAM 4GB/ ROM 64GB မော်ဒယ်ကို ၂၉၉,၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းချနေပြီး RAM 6GB/ ROM 64GB မော်ဒယ်ကိုတော့ ၃၃၉,၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းချနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Max Pro နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော့ အမြင်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင် Max Pro က Performace အပိုင်းကိုဘဲ ဦးစားပေးထားတဲ့ Budget Gaming Smartphone လို့ မြင်မိပါတယ်။ ဒီတော့ ကင်မရာ အရမ်းကြီး မကောင်းလည်း ရတယ်၊ ဂိမ်းတွေဆော့မယ်၊ ဗီဒီယို ကြည့်မယ်၊ Facebook သုံးမယ် ဆိုသူများအတွက် ASUS ZenFone Max Pro (M1) ဟာ အသင့်တော်ဆုံး စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Budget စမတျဖုနျး လောကကို တုနျလှုပျစခေဲ့တယျ့ ASUS ZenFone Max Pro (M1)
ဒီတော့ ASUS ရဲ့ ZenFone Max Pro (M1) က Budget စမတျဖုနျး လောကကို ဘယျအခကျြတှကွေောငျ့ တုနျလှုပျစခေဲ့တာလဲ ??? မေးစရာ ရှိလာပါတယျ။ ဒီလိုပါ… ZenFone Max Pro (M1) ဟာဆိုရငျ ခါတိုငျးမွငျတှနေ့ကြေ ASUS ရဲ့ ZenFone စီးရီးတှမှောလိုမြိူး ZenUI ကို အသုံးပွုထားခွငျးမရှိဘဲ Pure Android နဲ့ ပှဲထှကျလာခဲ့တဲ့ စမတျဖုနျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါတငျဘဲလား…ဆိုတော့ မဟုတျသေးပါဘူး။ ငှကေပျြ ၂သိနျး ဝနျးကငျြကို လကျထဲမှာကိုငျပွီး Snapdrgon 636 SoC နဲ့ ဘကျထရီ 5000mAh ပါတဲ့ စမတျဖုနျးကို စြေးကှကျထဲမှာ သှားရှာမယျဆိုရငျ ZenFone Max Pro တဈလုံးတညျးကိုသာ တှရေ့မှာပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ ZenFone Max Pro ဟာ ASUS ရဲ့ အကောငျးဆုံး စမတျဖုနျး တဈလုံး ဖွဈပွီး Price-to-Performace Ratio နဲ့ကွညျ့မယျဆိုရငျလညျး ရှေးခယျြသငျ့တဲ့ စမတျဖုနျး တဈလုံးလို့ ပွောရမှာပါ။
ZenFone Max Pro (M1) ရဲ့ Operating System အပိုငျးအတှကျ Android 8.1 Oreo ကိုထညျ့သှငျးပေးထားတာ ဖွဈပွီး ZenUI နဲ့ Customize ပွုလုပျမထားတဲ့အတှကျ Pure Android စမတျဖုနျး တဈလုံးလို အသုံးပွုနိုငျမှာပါ။ ဒီတော့ ZenUI မကွိုကျတဲ့သူတှနေဲ့ Android OS ကို ရိုးရိုးရှငျးရှငျး၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးခငျြတဲ့ သူတှအေတှကျ Max Pro က ရှေးခယျြစရာ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
Display အပိုငျးအတှကျ 5.99 inches FHD+ Display ကို အသုံးပွုထားပွီး Resolution ကတော့ 1080 x 2160 pixels ရှိပါတယျ။ အရငျတုနျးကဆိုရငျ ငှကေပျြ ၂သိနျး ဝနျးကငျြ သုံးရုံနဲ့ FHD+ Display ကို ပိုငျဆိုငျနိုငျဖို့ ဆိုတာ တျောတျော မလှယျတဲ့ ကိစ်စပါ။ ဒါ့အပွငျ Color Production အပိုငျးမှာလညျး Max Pro ရဲ့ Color Accuracy က တျောတျောလေး ကောငျးမှနျနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဗီဒီယိုဘဲ ကွညျ့ကွညျ့၊ ဂိမျးဘဲ ဆော့ဆော့ ကွညျလငျပွတျသားတဲ့ ရုပျထှကျတှကေို အပွညျ့အဝ ခံစားကွညျ့ရှု့နိုငျမှာပါ။
Performance အပိုငျးကို ပွောရမယျဆိုရငျ Max Pro ရဲ့ Processor အပိုငျးအတှကျ Mid-Range စမတျဖုနျးတှမှောသာ မွငျတှရေ့တဲ့ Snapdragon 636 SoC ကိုသုံးထားပါတယျ။ Graphic အပိုငျးအတှကျ Adreno 509 GPU လညျးပါဝငျဦးမှာပါ။ ကြှနျတျော စမျးသပျအသုံးပွုနတေဲ့ Max Pro ကတော့ Storage 32GB + RAM 3GB မျောဒယျဖွဈပွီး Storage 64GB + RAM 4GB နဲ့ 64GB + RAM 6GB မျောဒယျတှကေိုလညျး ရှေးခယျြဝယျယူနိုငျမှာပါ။ နောကျပွီး Graphic မွငျ့မှ ဆော့လို့ကောငျးတဲ့ PUBG လို Game မြိူးကိုတောငျ Medium Setting နဲ့ အထဈအငေါ့မရှိ ဆော့ကစားနိုငျတာ တှရေ့ပါတယျ။
Game ဆော့လို့ ကောငျးသှားပွီဆိုရငျ နောကျမှာကပျပွီး ပါလာတဲ့ လိုအပျခကျြက Battery life ပါ။ Max Pro မှာ 5000mAh ဘကျထရီ ပမာဏကို ထညျ့သှငျးပေးထားပွီး 5V/2A 10W အမွနျအားသှငျး စနဈလညျး ပါဝငျဦးမှာပါ။ သူရဲ့ Fast Charging က ကြှနျတျောစမျးကွညျ့သလောကျဆိုရငျ ၁နာရီနဲ့ ၁၅မိနဈခနျ့ အားသှငျးလိုကျတဲ့အခါမှာ ဘကျထရီအား ၄၅% အထိရောကျပါတယျ။ ဒီတော့ ၁၀၀% အားအပွညျ့သှငျးဖို့ဆိုရငျ ၂နာရီနဲ့ ၄၅မိနဈလောကျဘဲ လိုအပျမှာပါ။ ဘကျထရီအား အရမျးစားတဲ့ Mobile Legends တို့၊ PUBG တို့လို Game မြိူးတှကေို ၁နာရီလောကျ ဆော့မယျဆိုရငျတော့ ဘကျထရီအားက ၁၅% အထိကုနျတာ တှရေ့ပါတယျ။ ဒီတော့ ဂိမျးဆော့လိုကျ၊ Facebook သုံးလိုကျ၊ ဗီဒီယို ကွညျ့လိုကျ ဆကျတိုကျ လုပျနမေယျဆိုရငျတောငျ တဈနတေ့ာကတော့ ကောငျးကောငျးသုံးလို့ ရမှာပါ။
Security အပိုငျးအတှကျ Fingerprint Sensor ပါဝငျသလို Face Unlock စနဈကိုလညျး အသုံးပွုနိုငျမှာပါ။ Fingerprint Sensor က သာမနျထကျ နညျးနညျးလေးပိုကွာသလို ခံစားရပွီး Face Unlock ကတော့ Infrared Sensor မပါတဲ့အတှကျ ညဘကျလိုမြိူး အလငျးရောငျနညျးတဲ့ အခြိနျတှမှော ကောငျးကောငျး အသုံးပွုနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့လညျး သူရဲ့ စြေးနှုနျးနဲ့ နှိုငျးယှဥျကွညျ့မယျ ဆိုရငျတော့ ၂သိနျးဝနျးကငျြတနျ Budget စမတျဖုနျး တဈလုံးမှာ Fingerprint နဲ့ Face Unlock အသုံးပွုနိုငျတာကိုဘဲ ကြေးဇူးတငျရမလို ဖွဈနပေါပွီ။
ကငျမရာ အပိုငျးကို ပွောရမယျဆိုရငျ Aperture f/2.2 ရှိတဲ့ 13Megapixels Camera နဲ့ Aperture f/2.4 ရှိတဲ့ 5Megapixels Camera တှကေို Rear Camera အတှကျ တပျဆငျထားပွီး Front Camera အတှကျကိုတော့ Aperture f/2.2 ရှိတဲ့ 8Megapixels Camera ကို တပျဆငျထားပါတယျ။ Max Pro ရဲ့ ကငျမရာက Auto Focus နဲ့ Portrait Mode တှမှော အားနညျးပမေယျ့ Normal Shot နဲ့ Low Light photography အပိုငျးမှာတော့ မဆိုးဘူးလို့ ပွောရမှာပါ။ ရုပျထှကျတှကေ Color Accuracy အပိုငျးမှာ ပွောစရာ မလိုအောငျ ကောငျးမှနျနပွေီး Over Saturation ဖွဈနတောမြိူး မရှိပါဘူး။ ဗီဒီယိုအပိုငျးမှာလညျး 4K Ultra HD Video တှကေို 30fps နဲ့ ရိုကျကူးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ASUS ZenFone Max Pro (M1) ဟာ အလေးခြိနျအားဖွငျ့ 180 Grams လေးပွီးတော့ Triple SIM slot ပါဝငျတဲ့ စမတျဖုနျး တဈလုံး ဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့ SIM Card ၂ကဒျအပွငျ MicroSD ပါ တဈခါတညျးတှဲပွီး သုံးနိုငျမှာပါ။ Max Pro ရဲ့ RAM 3GB/ROM 32GB မျောဒယျကို မွနျမာနိုငျငံ ဈေးကှကျထဲမှာ လကျရှိ ရောငျးခနြတေဲ့ ဈေးနှုနျးကတော့ ၂၃၉,၀၀၀ ကပျြဖွဈပါတယျ။ RAM 4GB/ ROM 64GB မျောဒယျကို ၂၉၉,၀၀၀ ကပျြနဲ့ ရောငျးခနြပွေီး RAM 6GB/ ROM 64GB မျောဒယျကိုတော့ ၃၃၉,၀၀၀ ကပျြနဲ့ ရောငျးခနြတေယျလို့ သိရပါတယျ။ Max Pro နဲ့ ပတျသတျပွီး ကြှနျတော့ အမွငျကို ပွောရမယျဆိုရငျ Max Pro က Performace အပိုငျးကိုဘဲ ဦးစားပေးထားတဲ့ Budget Gaming Smartphone လို့ မွငျမိပါတယျ။ ဒီတော့ ကငျမရာ အရမျးကွီး မကောငျးလညျး ရတယျ၊ ဂိမျးတှဆေော့မယျ၊ ဗီဒီယို ကွညျ့မယျ၊ Facebook သုံးမယျ ဆိုသူမြားအတှကျ ASUS ZenFone Max Pro (M1) ဟာ အသငျ့တျောဆုံး စမတျဖုနျးတဈလုံး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
MyTech Myanmar2018-09-13T20:14:07+06:30August 22nd, 2018|Uncategorized|
Original iPhone Screen နဲ့ Copy iPhone Screen တွေရဲ့ ကွာခြားချက်များ
Huawei ကို တားမြစ်ခြင်းက ဥရောပဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကြီးကြီးမားမား အခက်တွေ့စေလိမ့်မည်ဟု Vodafone CEO ပြောကြား
Display Hole ပါတဲ့ Huawei Nova4ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဝယ်ယူနိုင်တော့မည်
Honor 8C ကို ဇန်နဝါရီလ ၂၈ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိတ်ဆက်မည်
ပြည်တွင်း ဈေးကွက်ထဲကို ဝင်ရောက်လာပြီ ဖြစ်တဲ့ Huawei Y7 Pro 2019
ထူးခြားတဲ့ 21:9 မျက်နှာပြင်အချိုးအစားနဲ့ XZ4 ရဲ့ Home Screen ပေါက်ကြား